IPFS: Rafitra mandroso miaraka amin'ny P2P sy Blockchain Technology | Avy amin'ny Linux
IPFS: Rafitra fisie mandroso miaraka amin'ny P2P sy Blockchain Technology
IPFS mampanantena hampiroborobo a Tranonkala nozaraina, satria io dia Protokol hypermedia P2P (Peer-to-Peer - Person to Person) namboarina hanao ilay tranonkala haingana kokoa, azo antoka ary misokatra kokoa.
Manana ny fiandohan'ny andian-teny amin'ny teny anglisy izy io, Rafitra fisoratana anarana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, izay midika amin'ny teny espaniola hoe, Rafitra fisoratana anarana eo amin'ny sehatra hafa, ary raha ny marina dia, System File mandroso miaraka amin'i Teknolojia P2P sy Blockchain.
Toy ny Teknolojia Blockchain, izay mbola tsy fantatry ny maro, IPFS izay tohanany dia vao mainka aza. Fa inona no voalaza bebe kokoa ao amin'ny sehatra teknolojia, satria maneho ny fanovana Internet, araka ny ahalalantsika azy ankehitriny.
Noho izany IPFS, afaka mameno na manolo ny ankehitriny Protocol Transfer Hypertext (HTTP), izay iray amin'izao fotoana izao, ary amin'ny sehatra manerantany, dia manatanteraka famindrana vaovao ao amin'ny rahona (tranonkala). Araka izany, IPFS mikendry ny hanova ny hetsika ankehitriny an'ny Internet miorina amin'ny mpizara afovoany amin'ny tranonkala iray voazara tanteraka eo ambanin'ny Teknolojia P2P sy Blockchain.
Mba hahatongavana a rafitry ny rakitra zaraina, miaraka amin'ny lahatahiry sy rakitra, izay afaka mampifandray ireo fitaovana informatika rehetra sy atiny nomerika, manerantany, miaraka amin'ilay rafitra fisie mitovy.
1 IPFS: Rafitra fisoratana anarana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena
1.1 Endri-javatra IPFS
IPFS: Rafitra fisoratana anarana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena
Ao aminy tranonkala ofisialy misy fampahalalana mahasoa be dia be momba ny teknolojia voalaza, ary ao amin'ny tranokala ofisialiny ihany koa ao GitHub. Na izany aza, anisan'ny mahatalanjona azo lazaina momba an'io ny manaraka:
Ny tanjony dia ny hahatonga ny tranonkala haingam-pandeha, ho azo antoka ary hisokatra bebe kokoa.
Mampiasà teknolojia fampandrenesana amin'ny haavon'ny rafitry ny rakitra.
Izy io dia maritrano itsinjaram-pahefana tanteraka hatramin'ny voalohany.
Mamela ny famoronana fampiharana nozaraina tanteraka.
Izy io dia rafitra fisie global mountable izay mampiasa ny teknolojia FUSE.
Ny atiny mifandraika amin'ny fampiasana ny HASH dia manome antoka ny maha-azo itokiana azy.
Izy io dia manambatra ny fampiasana teknolojia, toy ny, Blockchain, Kademlia, BitTorrent, ary Git.
Fifanarahana fizarana hypermedia, entin'ny atiny sy ny mombamomba anao.
Izy io dia manana serivisy fanomezana anarana antsoina hoe, IPNS, izay rafitra fanomezana anarana omen'ny SFS.
Ny fiasan'izy io dia mitovy amin'ny andiana bittorrent mivady mifanakalo zavatra git.
Modular izy io, satria manohana sosona asa maro miaraka amina fampiasa sy teknolojia samihafa.
Tranonkala indroa, izany hoe mamela anao hijery antontan-taratasy toy ny ao amin'ny tranonkala nentim-paharazana, izany hoe, amin'ny fomba mahazatra HTTP, in «https://ipfs.io/<path>», na amin'ny fomba maoderina amin'ny browser na fampiharana, amin'ny fomba IPFS: «ipfs://URL» o «dweb:/ipfs/URI».
IPFS Is a rafitry ny fametrahana fizarana izay manome antoka ny fahazoana maharitra amin'izy ireo, amin'ny famelana kopia marobe amin'ny hafa node izay manohana ny tambajotra. IPFS mitantana ny fifandraisana mifototra amin'ny atiny atrehana, manolo ny anarana (adiresy IP na URL) toy ny amin'izao fotoana izao, manome a modely fitahirizana sakana ho an'ny atiny avo lenta, misy rohy mankany amin'ny adiresy hyperlink ho an'ny atiny.
Ampiasao koa Mpamaritra IPFS izay mifandray amin'ny a Hash cryptographic ny atiny, izay manome antoka amin'ny fomba cryptographic, fa izy io dia maneho ny atin'ny rakitra ho toy ny tany am-boalohany, mandra-panovana azy manaraka, na kely na kely aza Mitondra tombony izany fiarovana ny atiny amin'ny fanodinkodinana tsy nahazoana alàlana, sy ny fahasimbany, izany hoe mankasitraka ny tsy fiovan'ny atiny.
Ary farany, eo amin'ny zavatra mahaliana hafa momba ity teknolojia ity dia ny fisian'izany tambajotra node, manalefaka na manafoana ny tsy fahombiazan'ny atiny, satria raha tsy mahomby ny fifandraisana amin'ny atiny nampiantrano tamina teboka iray an'ny tambajotra, dia azo idirana amin'ny iray hafa. Ary ho fanampin'izay, amin'ny fifandraisana matetika dia mahomby kokoa ny fifandraisana amin'ny IPFS, satria zavatra azo avela ny fandefasana amina teboka maromaro.
Raha misintona ireo rakitra loharano na installer-cross-platform (Windows, MacOS ary Linux) misy ary manatanteraka ny fomba fametrahana sy fampiasana ny fampiharana samihafa, azonao atao ny manomboka amin'ny fakana hevitra amin'ireto rohy manaraka ireto: Desktop IPFS en GitHub.
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" amin'ny «IPFS», inona no dikan'izany «Sistema de Archivos Interplanetario», ary izay tena mandroso File System miaraka amin'ny P2P sy Blockchain Technology miaraka amin'ny fampiasana sy ny sehatra manerantany, dia mahaliana sy mahasoa indrindra ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahafinaritra sy goavambe ary mihamitombo ny fampiharana sy ny «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » IPFS: Rafitra fisie mandroso miaraka amin'ny P2P sy Blockchain Technology
luiguiok dia hoy izy:
Efa tohanana ve io karazana haitao io sa ao anaty drafitra hampiasan'ny mpitety tranonkala azy?
Mamaly an'i luiguiok
Miarahaba anao Luiguiok! IPFS dia manana mpanjifa amin'ny birao manokana sy fampiharana hafa hivezivezy sy hiditra amin'ity haitao ity. Hatramin'izao dia tsy azo atao izany amin'ny alàlan'ny browser mahazatra.
Nikasa ny hanova ny lohahevitra ao amin'ny Ubuntu 20.04 ny Canonical